Ny tena fahatsaran-tarehy marina
"Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray" - Sal. 90:17.
Misy ho azy eo amin'ny besinimaro ny fironana handeha araka ny fihetseham-po fa tsy araka izay mahasoa. Eo anatrehan'izany, mikasika ny fanabeazana ny zanaka, dia zava-dehibe tokoa ny hitarihan'ny ray aman-dreny sy hanofanany ny sain'izy ireo ho tia ny fahamarinana, ny andraikitra ary ny fandavan-tena, hanana fahaleovan-tena mendrika, hifidy ny hanao ny mety raha ny besinimaro kosa mifidy ny tsy mety (..,)
Raha mitahiry ny toetra mahatoky sy ny toe-panahy maha-te ho tia izy ireo, dia hanana ny tena hatsaran-tarehy marina miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hilain'izy ireo intsony, amin'izay fotoana izay, ny hiravaka amin'ny zavatra ivelambelany izay maneho mandrakariva ny tsy fisian'ny firavahana anaty, dia ny tena fahatsaran-toetra marina. Sarobidy eo imason'Andriamanitra ny fahatsaran-toetra. Hahataona tokoa ny hatsarana toy izany, fa tsy mba hamily làlana. Ny toetra maha-te ho tia toy izany no loko maharitra ka tsy mba hatsatso velively.
Ny fivavahana madio avy amin'i Kristy dia mitaky amin'ny mpanaraka azy ny fahatsoran'ny fahatsaran-tarehy voajanahary mbamin'ny famirapiratan'ny fahadiovana ambony fa tsy ny ivelambelany sy izay an-kosotra ihany —CG, t. 424.
Misy firavahana tsy ho levona na oviana na oviana, izay hampitombo ny fahasambarana manodidina antsika rehetra eto amin'ity fiainana ity, ary hamirapiratra amin'ny fahazavana tsy mety lefy any amin'ny hoavy tsy misy fahafatesana. Tsy inona izany fa ny firavahan'ny toe-panahy malemy sady tsy misy avonavona (...) Endrey ny hasoan'ny toetr'i Kristy maha-te ho tia eo anatrehan'ny volamena sy ny vatosoa ary ny fitafiana sarobidy. Ny fahatsaran-tarehy avy ety ivelany dia miankina amin'ny firindran'ireo ampahany rehetra mandrafitra ny zavatra iray, saingy ny fahatsaran-tarehy ara-panahy kosa dia arakaraka ny firindran'ny fanahafan'ny fanahintsika an'i Jesôsy. Hahatonga ny olona manana io toe-panahy io ho mihoatra lavitra noho ny volamena tsara izany, eny, noho ny volamena avy any Ofira aza. Fihaingoana tsy voavidy vola ny fahasoavan'i Kristy. Manandratra sy mahamendrika izay manana azy izany ary mandefa tara-boninahitra ho eo amin'ny hafa ka mitaona azy ireo koa ho eo amin'llay Loharanon'ny fahazavana sy ny fitahiana. — CO, tt. 423,424.